Waa maxay Swag? Ma U qalantaa Maalgelinta Suuqgeynta? | Martech Zone
Haddii aad ganacsi ku jirtay muddo dheer, waad garanaysaa waxa Qofka warwareega waa Weligaa ma la yaabtay halka uu ereyga ka yimid, in kastoo? Swag dhab ahaantii waxaa lagu aflagaadeeyay hanti la xado ama booli ah oo la isticmaalay 1800-meeyadii. Erayga Bacda Waxay u badan tahay in ay ahayd isha af-lagaadada… waxaad ku ridday dhammaan boolidaadii bac wareegsan oo aad la baxsatay Qofka warwareega. Shirkadaha wax duuba waxay qaateen ereyga horraantii 2000-meeyadii markii ay meel isugu geyn lahaayeen boorso hadiyado ah iyo walxo calaamadeysan oo ay la socdaan albamka cusub ee la sii daayay… iyagoo rajeynaya in DJ-yadu ay fiiro gaar ah u yeeshaan farshaxankooda.
Istaraatiijiyadu wax badan iskamay beddelin… marka laga reebo xaqiiqda ah inaadan u baahnayn inaad qof dambe bililiqato. Booqo calaamad ku taal xaruntooda ama shir, waxaana inta badan aad la kulmeysaa waxyaabo bilaash ah oo bilaash ah… Dabcan, qaar swag ah waa mid aad u xun, raqiis ah, oo kaliya waxay helayaan jidka qashinka hoteelka. Dharka noocan oo kale ah waa mid aad u fiican.
Mid ka mid ah walxaha aan ugu jecelahay swag waa darawal USB ah oo ka yimid adduunka caanka ah Makhaayada St. Elmo gudaha magaalada hoose ee Indianapolis. Markii aan khadka internetka kula wadaagay wax ku saabsan dhawr safar oo ganacsi iyo qoys oo aan halkaas ku qaadan lahaa, kooxdooda suuqgeyntu waxay iga yaabisay bac ay ka buuxaan xawaashka ay caadada u leeyihiin, suugo, iyo jawharadkan yar. Waxa aan ku fadhiyaa (siigo leh) miiskayga oo had iyo jeer waxay keentaa xusuus wacan oo makhaayadda ah… iyo is biirsaday shrimp-keeda cajiibka ah.
Swag ma shaqeeyaa?
Hagaag, taasi waa $ 24 bilyan su'aal, sax? Jawaabta saxda ah waa… mararka qaarkood. Aragtida ka dambeysa swag waa dhinacyo badan:
brand - Markaad calaamadeyso hadiyad bilaash ah, waxaad dhisi kartaa wacyiga astaanta.
Xasuusta - Adigoo siinaya shay jireed, rajada ama macaamiishu waxay la socdaan wax iyaga xasuusinaya adiga, astaantaada, badeecadaada, ama adeeggaaga.
Isxilqaan - Mar kasta oo aad qof hadiyad siiso, xataa mid yar, waxaa jira dareen bini'aadmi ah oo aan jeclaan lahayn inaan u celino qofkaas.
Dadka ku jira Hackers-ka Iibka ayaa sameeyay tijaabada A/B halkaas oo ay ku dartay swag dalab… xitaa way ka naxeen natiijada:
Kooxda heshay swag waxay saddex jeer uga dhowdahay inay ballan qabsadaan kulan, iyo Outreach waxay aragtay korodhka 2.42x ee qiimaha fursada rajada kooxda imtixaanka.
Shakhsi ahaan, waxaan u mahadnaqayaa shakhsi ahaan iyo qaali Qofka warwareega marka loo eego qashinka jaban ee buuxin doona qashin-qubka. Gaar ahaan haddii ay si uun qiimo ugu fadhido qaatahaaga. Waxaa jira waxyaabo ka reeban, dabcan. Ma isticmaalo USB Drive-ka Shrimp Cocktail… laakiin aad ayay u fiican tahay in aan ku hayo miiskayga.
Halkee ayaad Nakhshad kartaa, ka dalban kartaa, oo aad ku maamuli kartaa Swag kaaga?
Waxay ahaan jirtay waqti aad u badan in la naqshadeeyo swag, xigasho, iyo dalbo ku filan si loo yareeyo kharashaadka. Shabakaddu waxa ay ku soo baraarugtay daraasiin goobood oo aad ka heli karto qiimo jaban, khariban xeebeed oo aadan fikrad ka haysan tayada. Waxaan isku dayay dhowr sano in aan si fiican u galo oo had iyo jeer waxay ahayd kulayl ama qabow.
Swag.com waa goob loo dhisay si gaar ah loogu soo gadanayo swag tayo sare leh sumaddaada. Waxay soo diyaariyeen oo tijaabiyeen kumanaan badeeco - waxayna ku xaddideen agabkooda 5% ee ugu sarreeya alaabooyinka casriga ah, caanka ah, oo ka taga aragti. Waxa kale oo ay si otomaatig ah u sameeyeen dhammaan waayo-aragnimada wax iibsiga. Waxaad si fudud u heli kartaa waxaad raadinayso, geliso naqshadayntaada, ku majaajilooto alaabtaada, oo aad hubiso wax yar ilbiriqsi gudahood.
Swag.com waxay haysaa badeecooyin loogu talagalay guriga, xafiiska, dharka, alaabta cabitaanka, bacaha, tignoolajiyada, fayoobaanta, waxayna leeyihiin noocyo badan oo caan ah oo laga xusho. Xitaa waxaad ku maamuli kartaa armaajooyinkaaga Swag onlayn:
Marka laga soo tago u beddelashada horseedda rajooyinka, swag waxaa loo isticmaali karaa in lagu abaalmariyo macaamiishaada ugu fiican, bini'aadantinimada shirarka khadka tooska ah, iyo xitaa la macaamilka shaqaalahaaga fog.
Nakhshad Waxoogaa Awood Weyn Hadda!
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Swag.com oo waxaan isticmaalayaa isku xirka maqaalkan.
Tags: shaqo swag ahgiveawaydalbo swagisu dheelitirnaantashrimp cocktailst elmosQofka warwareegaswag.comUSB drive
CometChat: Qoraal, Qoraal kooxeed, Cod, iyo Sheekaysi Fiidyow API iyo SDKs